Thi PP Lar
ရန်ကုန်မှာ ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ စားသောက်ဆိုင်တွေသွားတဲ့အခါ… ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီ တစ်နေရာတည်းမှာကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ အခုပဲ ""သိပြီးပြီလား"" မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူလိုက်တော့နော်။
တစ်ရက် ၁၀၅ ကျပ်
“ Thi P P Lar ” Service မေးလေ့မေးထရှိသည့် မေးခွန်းများ
1) “Thi P P Lar” Service ဆိုတာဘာလဲ?
Thi P P Lar Service ဆိုသည်မှာ MPTအသုံးပြုတွေသာခံစားခွင့်ရှိပြီး ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးတွင်ရှိသော Restaurant, Bar, Club,စသည်တို့၏ ပရိုမိုးရှင်းသတင်းများကို တစ်နေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သော Android App ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
2) “Thi P P Lar ” service ကိုအသုံးပြုလိုပါက ဘယ်လိုရယူရပါမလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုလိုပါက 8065 သို့ ON ဟု စာတိုပေးပို့ပြီး ရယူနိုင်ပါသည်။ (သို့မဟုတ်)
“Thi P P Lar” Application မှတစ်ဆင့်ဖြင့်လည်း ဝန်ဆောင်မှုရယူနိုင်ပါသည်။
Application ကို Google Play Store မှသော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်)
MPT ၏ လိုတရ http://tpl.lotayamm.com/ မှတစ်ဆင့် data charges free ဖြင့် download ရယူနိုင်ပါသည်။
Application မှတစ်ဆင့် ဝန်ဆောင်မှုရယူမည်ဆိုပါက applicationအား install ပြုလုပ်ပြီးနောက် Subscribe လုပ်ပါ၊ ပြီးရင် MPT ဖုန်းနံပါတ်ဖြင့်ဝင်ပြီး One Time Password (OTP) ပို့လာပါလိမ့်မည်။ ထို့နောက် ပို့လာသော OTP ဖြည့်ပြီး နောက်တွင် “Thi P P Lar” ဝန်ဆောင်မှုအားအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
**** Thi PP Lar Application ကို Android ဖုန်းများတွင်သာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3) “Thi P P Lar” service ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခမှာ ဘယ်လောက်ပါလဲ။
Thi P P Lar ဝန်ဆောင်မှုကို စတင်သုံးစွဲသူများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုအား ၇ ရက်အခမဲ့ တိတိ (ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသူများသာ)အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Thi P P Lar ဝန်ဆောင်မှုကို Item မျိုးစုံ၏ ပရိုမိုးရှင်းသတင်းများကို တစ်နေရာ တည်းတွင်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် နှင့်အသုံးစရိတ်ပိုမိုချွေတာနိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးအသုံးပြုသူအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို ၁၀၅ ကျပ် (အခွန် ၅ % ပါဝင်ပြီး) ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Thi P P Lar ဝန်ဆောင်မှုကို ၇ ရက်အခမဲ့ကာလပြီးဆုံးသွားပြီး ၈ ရက်မြောက်နေ့ တွင်စတင်ပြီး ဝန်ဆောင်ခကိုနေ့စဉ်ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
4) “Thi P P Lar” service ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်သလဲ။
“Thi P P Lar” ဝန်ဆောင်မှုတွင် Itemအမျိုးအစား နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ပရိုမိုးရှင်းသတင်း များကို ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
5) ဝန်ဆောင်မှုအား ရပ်တန့်လိုပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲ။
ဝန်ဆောင်မှုအားရပ်တန့်လိုပါက APP မှတစ်ဆင့် Unsubscribe လုပ်ပါ။ (သို့မဟုတ်) 8065 သို့ OFF ဟု ပေးပို့လိုက်ပါ။
ကျွနု်ပ်တို့၏ App မှ သင်မေးလိုသောမေးခွန်းများကို ရှာဖွေမတွေ့နိုင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ Call center သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ခေါ်ဆိုရန်ဖုန်နံပါတ်များ- ၀၉၈၉၃၄၃၃၃၃၈/ ၀၉၈၉၃၄၃၃၃၃၉/ ၁၀၆
ကျွနု်ပ်တို့၏ Thi P P Lar Facebook Page သို့လည်း ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
FAQs of “Thi P P Lar ” Service
1) What is Thi P P Lar Service?
Thi P P Lar service isaAPP service to know promotion information of their favourite thing in one place such as Restaurant, Bar, Club, Café, Shopping Mall, Cosmetics, Beauty & Spa, Gym, Training School, Electronic, Book Shop, Photo & Studio, Travel & Tours, Accomodation, Pharmacy in Yangon for MPT Subscribers only.
2) How to access Thi P P Lar service?
Subscribers who want to subscribe Thi P P Lar service can send ON to 8065 via SMS (or)
Subscribers can subscribe Thi P P Lar service through Application.
It can download Application from Google Play Store (or)
Customer can download Thi P P Lar Application via MPT’s LoTaYa Portal http://tpl.lotayamm.com/ with data charges free.
If you would like to subscribe via Application, please install the App first. After that, users can subscribe using MPT Number and MPT will send OTP. And after filled OTP number, users can use enjoying our Thi P P Lar service.
**** This application is only support for Android phones.
3) How much is the charge for subscription Thi P P Lar Service?
Thi P P Lar service will give7days FREE trail offer (for first time users only).
Users will be charged 105Ks/daily (including 5% tax). Thi P P Lar isadaily subscription service that let users know promotion information of all items.
Users will be charged at 105ks/day starting from 8th day after free trial period.
4) How can use Thi P P Lar service?
You can search promotion informations by category and township in Thi P P Lar service.
You can serach the shops near by with you.
5) How to unsubscribe Thi P P Lar service?
To unsubscribe, type OFF and send to 8065 via SMS (or) can unsubscribe through APP.
6) How do I contact User Support?
If you can’t find the answer to your question on our help site, you can always get in touch with call center. We will support you well.
Call – 09893433338 / 09893433339 /106
You can ask your question through our Facebook Page (Thi P P Lar).
ဤစာမျက်နှာသည် [Thi P P Lar](²Promotion²)တွင်ပါဝင်ကံစမ်းသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့်လိုက်နာ ရမည့်စည်းကမ်းချက်များအား ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ Promotionအား မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (“MPT”၊ “ကျွနု်ပ်တို့”၊ “ကျွနု်ပ်တို့ကို”၊ “ကျွနု်ပ်တို့၏”)က ဆောင်ရွက်ပေးသော ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် ရယူ နိုင်ပါသည်။ Promotion ကို [Alinntaike Company
] Alinntaike Company က စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင်ပါဝင်ကံစမ်းခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်သည့်အခြားသော သက်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ မူဝါဒများနှင့် စည်းကမ်းချက်များ (စုပေါင်း၍ “စည်းကမ်းချက်များ” ဟု ခေါ်ဆိုရန်) ကိုဖတ်ရှုပြီး နားလည်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ စည်းနှောင်မှုကိုခံယူရန် သဘောတူကြောင်း သဘောဆောင်ပါ သည်။
၁.၁ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း Promotion ကို Alinntaike Company ကအပြည့်အဝ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ Promotion တွင် MPT ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတိုင်းအတာသည်အောက်တွင်ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြမည့် ကျသင့်ငွေကောက်ခံခြင်း (Bill) နှင့် စာရင်းပေး သုံးစွဲခြင်း (Subscription) ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများဖြင့် ကန့်သတ်ထားပါသည်။
၁.၂ စည်းကမ်းချက်များတွင် သင်အားအတိအလင်းအပ်နှင်းထားခြင်းမရှိသည့်အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွနု်ပ်တို့က သို့မဟုတ် ကျွနု်ပ်တို့၏အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့်အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများက သီးသန့် ရယူထိန်း သိမ်းထားပါသည်။ သင်အနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် ဥပဒေတွင် ခွင့်ပြုသည့်အတိုင်းသာ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပြီးအခြားသောအသုံးပြုခံစားမှုအားလုံးကို တင်းကျပ်စွာ တားမြစ် ထားပါသည်။
Alinntaike Company သို့မဟုတ်အခြားတတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှအခြားနည်းဖြင့် တရားသဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းမှ လွဲ၍ သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အတိုင်း ဤ Promotion နှင့်စပ်လျဉ်းသော ဆော့ဖ်ဝဲ၊ ရုပ်ပုံများ၊ စာသား၊ ဂရပ်ဖစ်များ၊ သရုပ်ဖော်မှုများ၊ လိုဂိုများ၊ တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်တံဆိပ်များ၊ မူပိုင်ခွင့်များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊အသံ၊ ဗီဒီယိုများ၊ ဂီတနှင့်အကြောင်းအရာအပါအဝင် ၎င်းတို့ချည်းသာ မဟုတ်သော (စုပေါင်း၍ “အကြောင်းအရာ”) MPT ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအချက်အလက် တစ်ခုခုနှင့် ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဉာဏပစ္စည်းအခွင့်အရေးများအားလုံးမှာ MPT နှင့် ၎င်း၏အသုံးပြုခွင့်ပေးသူများ၊ ထောက်ပံ့သူများ၊ ထုတ်ဝေသူများ၊အခွင့်အရေးကိုင်ဆောင်သူများနှင့်အခြားသောအကြောင်းအရာပံ့ပိုးသူများ၏ သီးသန့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ဤတွင်အတိအလင်း ဖော်ပြ ထားသည်မှလွဲ၍ Promotion ၏ မည်သည့်အရာကမျှ ဉာဏပစ္စည်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများတစ်ခုခု တွင်ရှိသော သို့မဟုတ် ထိုအောက်တွင်ရှိသောအသုံးပြုခွင့်တစ်ခု သို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖန် တီးသည်ဟု မမှတ်ယူရ။ Promotion တွင် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သောအချက်အလက်များတစ်ခုခု သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုခုမှ ဆင့်ပွားရရှိလာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း၊အသုံးပြု ခွင့်ပေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ဆင့်ပွားကူးယူခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ပြသခြင်း၊ လူအများ မြင်သာစေရန် ဖျော်ဖြေခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သင့်လျော် သလို ပြင်ဆင်အသုံးပြုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖန်တီးခြင်းများကို သင့်အနေဖြင့် မပြုလုပ် ရန် သဘောတူပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များမှအတိအလင်း ခွင့်ပြုမထားသော မည်သည့်ရည်ရွယ် ချက်အတွက်မဆိုအကြောင်းအရာအားအသုံးပြုခြင်းကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ထားပါသည်။
၃.၁ Promotion ကာလသည် [၁၄.၂.၂၀၁၉ ] မှ [၁၃.၅.၂၀၁၉]အထိ (²Promotion ကာလ²) ဖြစ်ပါ သည်။
၃.၂ Promotion တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ရန် သင်အနေဖြင့် [Thi P P Lar ဝန်ဆောင်မှု] ကို Promotion ကာလအတွင်း စာရင်းပေးသုံးစွဲရမည်။
[တရားဝင်မှတ်ချက် - စာရင်းပေးသုံးစွဲခြင်း၏စည်းကမ်းချက်အသေးစိတ်သည် ပါဝင်ပတ်သက်သည့် ထောက်ပံ့ပေးသူများ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီဖြစ်ရမည်။]
Promotion တွင် Alinntaike Company အပါအဝင် တတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှ ရရှိသော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့က ပံ့ပိုးပေး ထားသောအကြောင်းအရာ(²တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ²)တို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါတတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ် သော ချိတ်ဆက်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုခုအတွက် MPTတွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ တတိယ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုခုအား ရည် ညွှန်းချက်သည် MPT က ထောက်ခံမှု၊ ကမကထပြုမှု သို့မဟုတ်အကြံပြုမှု မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ထိုသို့သွယ်ဝိုက်ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
[CP အနေဖြင့် Promotion ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဤတွင် ၎င်းတို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းရမည်။အကြုံပြုလိုသောခေါင်းစည်းများအားအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါသည်။]
Thi P P Lar ဝန်ဆောင်မှု၏ ကံစမ်းမဲ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များ
[8065 ကို “ON” ဟုပေးပို့ပြီး “Thi P P Lar” ဝန်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးစွဲသူဖြစ်ရပါမည်။ ပထမဦးဆုံးသုံးစွဲသူများအတွက် ၇ ရက်အခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်။]
၂။ ချီးမြှင့်မည့်ကံထူးဆု (များ)
[ရွှေတစ်ကျပ်သား (၃) ဆု နှင့် MPT Top – Up Card (3000) တန် ကတ် ၃၀၀]
[ကံထူးရှင်များကို 22.3.3019 တွင် တစ်ကြိမ်၊ 26.4.2019 တွင်တစ်ကြိမ်၊ 24.5.2019 တွင်တစ်ကြိမ် ရွေးချယ်သွားပါမည်။]
[ကံထူးရှင်များကို 22.3.2019 ~ 27.3.2019 တွင်လည်းကောင်း၊ 26.4.2019 ~ 2.5.2019 တွင်လည်းကောင်း၊ 24.5.2019 ~ 29.5.2019 တွင်လည်းကောင်း ဖုန်းဆက်၍အကြောင်းကြားသွား ပါမည်။]
၅.၁ ကံထူးဆုများအားလုံးအား လဲလှယ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၊ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မ ဟုတ် ငွေကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းတို့ ပြုလုပ်၍မရပါ။
၅.၂ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သောကံထူးရှင်များအားလုံးတွင်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းအား လုံးအပါအဝင်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းတို့သာဟုကန့်သတ်မထားသည့်အမျိုးသားမှတ် ပုံတင်ဒ်ပြားရှိရမည်။
၆။ ကံထူးရှင်အား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း
၆.၁ Alinntaike Company သည် ပါဝင်ကံစမ်းသူတစ်ဦးအားကြိုတင်၍ အကြောင်းမကြားဘဲ သို့မဟုတ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုပေးရန်မလိုအပ်ဘဲ ပုံမှန် မဟုတ်သော သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုခု ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်း သံသယရှိပါက ထိုပါဝင်ကံစမ်းသူအား စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
MPT Terms and Conditions – [Name of Promotion]
This page explains the terms by which you agree to abide by when participating in the [Thi P P Lar] (“Promotion”). The Promotion can be accessed through services provided by Myanma Posts and Telecommunications (“MPT”, “we”, “us”, “our”). The Promotion is operated by and provided to you by Alinntaike Company. By participating in the Promotion, you signify that you have read, understood, and agree to be bound by these Terms and Conditions and any other applicable rules, policies and terms associated therewith (collectively, the “Terms”).
As mentioned above, the Promotion is fully operated by Alinntaike Company.The scope of MPT’s involvement with the Promotion is limited to billing and subscription functions only, which will be further explained below.
Except as otherwise rightfully operated by [Alinntaike Company ] or any other third party, as applicable, any MPT proprietary material related to the Promotion, including, without limitation, software, images, text, graphics, illustrations, logos, patents, trademarks, service marks, copyrights, photographs, audio, videos, music, and content (collectively, “Content”), and all intellectual property rights related thereto, are the exclusive property of MPT and its licensors, suppliers, publishers, rights holders, or other content providers. Except as explicitly provided herein, nothing in the Terms shall be deemed to createalicense or right in or under any such intellectual property rights, and you agree not to sell, license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, reverse engineer, transmit, publicly display, publicly perform, publish, adapt, edit or create derivative works from any materials or Content accessible on the Promotion. Use of the Content for any purpose not expressly permitted by the Terms is strictly prohibited.
The Promotion period is from [14.2.2019] to [13.5.2019] (“Promotion Period”).
In order to participate in the Promotion, you must subscribe to the [Thi P P Lar Service] during the Promotion Period.
[Legal Note: Details of the terms of subscription should be under the Content Provider’s Terms and Conditions.]
The Promotion may aggregate content obtained or provided by third parties, including [Alinntaike Company ] (“Third Party Content”). As such, MPT is not responsible for such Third Party Content or any linked websites associated with Third Party Content. Reference to any information, products or services of third parties does not constitute or imply endorsement, sponsorship or recommendation by MPT.
[CP to include their terms and conditions here for conducting the Promotion. Suggested headings are indicated below.]
[It have to subscribe sending “ON” to 8065 to get “Thi P P Lar” Service.7Days free for first time user.]
[Gold plate (1 Tical) -3prizes and MPT Top – up Card (3000) – Card 300 ]
[We will select the winner on 22.3.3019 1 time, 26.4.2019 1 time and 24.5.2019 1 time. ]
[We will announce the winner by phone on 22.3.2019 ~ 27.3.2019, 26.4.2019 ~ 2.5.2019 and 24.5.2019 ~ 29.5.2019]
Use of the Prize(s)
All prizes are non-exchangeable, non-transferrable, non-assignable or not convertible to cash.
All confirmed winners must have national identification card, including but not limited to, all the necessary documentation.
Alinntaike Company has the discretion to disqualifyaparticipant whom it suspects to be undertaking or in connection with any unusual or suspicious activities, without prior notice or without needing to give any reasons for doing so.